Yesu Kristo—Mesia a Wɔhyɛɛ Ne Ho Bɔ No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
NEA ɛbɛboa yɛn ma yɛahu Mesia no, Yehowa Nyankopɔn maa Bible mu adiyifo pii de Ogyefo a wɔhyɛɛ ne ho bɔ yi awo, ne som adwuma, ne ne wu ho nkyerɛkyerɛmu mae. Bible mu nkɔmhyɛ ahorow yi nyinaa nyaa mmamu wɔ Yesu Kristo so. Ɛbaa mu pɛpɛɛpɛ ma ɛyɛɛ nwonwa. Ma yensusuw nkɔmhyɛ ahorow a ɛkaa Mesia no awo ne ne mmofraase ho nsɛm siei no kakra ho mfa nkyerɛkyerɛ eyi mu.
Odiyifo Yesaia ka siei sɛ Mesia no befi Ɔhene Dawid abusua mu. (Yesaia 9:7) Wɔwoo Yesu wɔ Dawid abusua mu ampa.—Mateo 1:1, 6-17.
Onyankopɔn diyifo foforo, Mika, nso ka siei sɛ abofra yi bɛyɛ sodifo, na wɔbɛwo no wɔ “Bet-Lehem a ɛwɔ Efrata.” (Mika 5:2) Bere a wɔwoo Yesu no, na nkurow abien na ɛwɔ Israel a wɔfrɛ hɔ Betlehem. Ná biako bɛn Nasaret a ɛwɔ ɔman no atifi fam no, ɛnna nea na ɛka ho no nso bɛn Yerusalem a ɛwɔ Yuda no. Bere bi ná anka wɔfrɛ Betlehem a ɛbɛn Yerusalem no Efrata. Sɛnea nkɔmhyɛ no ka siei pɛpɛɛpɛ no, saa kurow no ara mu na wɔwoo Yesu!—Mateo 2:1.
Bible nkɔmhyɛ foforo ka siei sɛ wɔbɛfrɛ Onyankopɔn Ba no ‘afi Misraim.’ Bere a na Yesu yɛ abofra no, wɔde no kɔɔ Misraim. Bere a Herode wui no, wɔde Yesu fii Misraim, na ɛmaa nkɔmhyɛ no baa mu.—Hosea 11:1; Mateo 2:15.
Wɔ nsɛm a wɔahyehyɛ a wɔato din [“Mesia No Ho Nkɔmhyɛ Ahorow”] no mu no, Mesia no ho nsɛm wɔ kyerɛw nsɛm a ɛwɔ asɛmti “Nkɔmhyɛ” no mu. Fa eyi toto kyerɛw nsɛm a wɔahyehyɛ wɔ asɛmti a ɛne “Ne Mmamu” no ase ho hwɛ. Saa a wobɛyɛ no bɛhyɛ gyidi a wowɔ sɛ Onyankopɔn Asɛm yɛ nokware no mu den.
Bere a worehwehwɛ kyerɛw nsɛm yi mu no, kae sɛ wɔkyerɛw nea ɛyɛ nkɔmhyɛ no mfirihyia ɔhaha pii ansa na wɔrewo Yesu. Yesu kae sɛ: “Etwa sɛ nea wɔakyerɛw afa me ho wɔ Mose mmara ne Adiyifo no ne Nnwom no mu nyinaa ba mu.” (Luka 24:44) Sɛnea w’ankasa wubetumi ahu wɔ wo Bible mu no, ne nyinaa baa mu pɛpɛɛpɛ!
Wɔwoo no Yuda abusua mu Genesis 49:10 Luka 3:23-33
Ɔbaabun na ɔwoo no Yesaia 7:14 Mateo 1:18-25
Ofi Ɔhene Dawid abusua mu Yesaia 9:7 Mateo 1:1, 6-17
Yehowa frɛɛ no ne Ba Dwom 2:7 Mateo 3:17
Wɔannye no anni Yesaia 53:1 Yohane 12:37, 38
Ɔtraa afurum so kɔɔ Yerusalem Sakaria 9:9 Mateo 21:1-9
N’adamfo pa yii no mae Dwom 41:9 Yohane 13:18, 21-30
Woyii no mae de gyee nnwetɛbona 30 Sakaria 11:12 Mateo 26:14-16
Ɔyɛɛ komm wɔ n’anototofo anim Yesaia 53:7 Mateo 27:11-14
Wɔbɔɔ ne ntade so ntonto Dwom 22:18 Mateo 27:35
Wɔyaw no bere a ɔsɛn dua so Dwom 22:7, 8 Mateo 27:39-43
Wɔammu ne nnompe mu Dwom 34:20 Yohane 19:33, 36
Wosiee no adefo mu Yesaia 53:9 Mateo 27:57-60
Wamporɔw na wonyan no Dwom 16:10 Asomafo Nnwuma 2:24, 27
Wɔde no kɔtraa Onyankopɔn nifa Dwom 110:1 Asomafo Nnwuma 7:56